क्यान्सरमा संसार हल्लाएका डा. विशाल कसरी भए सफल ? – Nepali Health
क्यान्सरमा संसार हल्लाएका डा. विशाल कसरी भए सफल ?
२०७४ मंसिर १५ गते १२:४९ मा प्रकाशित
नागोया युनिभर्सिटी जापानबाट मेडिकल अंकोलोजीमा पिएचडी सकेर भर्खरै नेपाल फर्केका डा. ज्ञवालीसंग नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले उनका सफलताका बारेमा कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको संक्षेप उनकै शव्दमा :
विद्यालय यात्रा :
मेरो नर्सरी देखि एसएलसी सम्मको अध्ययन बुटवलस्थित न्यु होराइजन स्कुलबाट भयो । त्यहि स्कुलबाट मैले विसं २०५९ सालको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भई नेपाल प्रथम (बोर्ड फस्ट) भएँ । त्यतिवेला मैले ९२.३८ प्रतिशत ल्याएको थिएँ ।
कलेज यात्रा :
एसएलसीमा नेपाल प्रथम भएपछि प्लस टूको अध्ययन गर्न म काठमाडौँ आएँ । बानेश्वरस्थित ह्वाइट हाउस कलेजमा भर्ना भएँ र त्यहिबाट प्लसटू सिध्याएँ ।
मेडिकल शिक्षा यात्रा :
प्लस टू सकिनासाथ मेरो पहिलो लक्ष्य थियो चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)द्धारा लिइने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा । त्यो परीक्षा सुरुमै हुन्थ्यो । मलाई त्यो परीक्षा एकै पटकमा पास गर्नु थियो र छात्रबृत्तिमा एमबीबीएस पढ्नु थियो ।
यसरी गर्दथेँ मेडिकल इन्ट्रान्सको तयारी :
जापानको यात्रा :
जापानमा रहँदा खुब पेपर लेखियो :
उमेरका हिसावले सबै आश्चर्य :
क्यान्सर सम्मेलनमा बोलिने मेरा भिडियो धेरै हेरिएका मध्ये :
मेडिकल जर्नलको सम्पादक तथा सल्लाकार :
अहिले म बेलायतबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध बीएमजे भनिने ब्रिटिस मेडिकल जर्नल छ । त्यो जर्नलको सम्पादकको सल्लाहकारमा नियुक्त भएको छु ।
अहिले पछिल्लो पटक बेल्जियमको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन छ एन्टी क्यान्सर फण्ड भन्ने त्यसको मेडिकल कन्सलटयान्ट पनि छु ।
एउटा सामान्य नेपालीले मेडिकल फिल्डका यी उपलव्धी हासिल गर्नु ठूलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । मलाई गर्व पनि यसैमा छ ।
यो स्थानसम्म आउँदा परिवारले खासै खर्च गर्नुपरेन :
मेरो यो स्थानसम्मको पढाईका लागि परिवारले खासै खर्च गर्नु परेन नै भन्दा हुन्छ । एसएलसी भन्दा अघि नै म स्कुलमा सधै प्रथम हुन्थे । त्यसले गर्दा स्कुलमा शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो ।
क्यान्सरमा मेरो बुझाई :
विकशित र विकासोन्मुख मुलुकमा रोग उस्तै समस्या फरक :
एक बर्षमा कति जनालाई क्यान्सर लाग्छ । क्यान्सर लागि सकेपछि पाँच बर्षसम्मको सभाइभल रेट कति छ ? कुन क्यान्सर बढी छ भन्ने केही छैन । यसले समस्या बढेको हो ।
अहिले त विरामीले कस्तो उपचार पाउछन भन्ने कुनै मापदण्ड नै छैन । ठूलो आन्द्राको क्यान्सर छ भने तपाईँ कति बर्ष बाच्नु हुन्छ र तपाईँमा कुन उपचार विधि प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा डाक्टरले निर्धारण गर्ने भयो । अर्थात तपाईँ जुन डाक्टरको जानुहुन्छ उसको उपचार गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ । किनकी यहाँ नेशनल गाइडलाइन नै छैन ।
त्यसैले विरामीले उपचार गर्दा घरबारी जान्छ कि भन्ने चिन्ता रहँदेन तर नेपालमा उपचार गर्दा डाक्टरले विरामीको सबै कुरा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो उपचार गर्दा ४ महिना बढी त बाँचीएला तर त्यसले घर खेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? आदि सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन कुरा जापानमा उपचार गर्दा कहिल्यै सोच्नु नै परेन ।
कतिपय औषधिहरु तपाईँ चलाउन खोज्नुहुन्छ तर पाइदैन । देशमै छैन । यस्ता समस्याले नेपाल मात्रै होइन नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरु पिल्सिएका छन् ।
One thought on “क्यान्सरमा संसार हल्लाएका डा. विशाल कसरी भए सफल ?”
Thank you Dr. Bishal . We are very proud of you.I hope you will contributealot for the people and the nation from your related medical field .